समानुपातिकको मतगणना सम्पन्न, कुन दलले कति सिट पाउँछन् ? – SidhaRekha
समानुपातिकको मतगणना सम्पन्न, कुन दलले कति सिट पाउँछन् ?
२०७४ पुष २, आईतवार १६:१८ December 17, 2017
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ९५ लाख ४४ हजार ७४१ मत सदर भएको छ भने ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत सहित एमाले पहिलो दल बनेको छ ।
अघिल्लोपाटन नगर कार्यपालिकामा विवाद हुँदा सेवाग्राही मार्कामा
पछिल्लोबैतडी जिल्लाका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी गएनन्